Tababarayaasha Kooxaha Juventus iyo Roma oo la Ganaaxay – Radio Muqdisho
Tababarayaasha Kooxaha Juventus iyo Roma oo la Ganaaxay
Xiriirka kubada cagta ee dalka talyaaniga ayaa ganaaxay tababaraha kooxda Roma Rudi Garcia iyo tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri.
Tababaraha kooxda Roma Rudi Garcia ayaa tarabuunka ka daawan doono ciyaarta ay sabtida kooxda Roma ay garoonkeeda Stadio Olimpico kula ciyaari doonto kooxda AC Milan iyo ciyaarta ay 6-da bisha Janauary la ciyaari doonto kooxda Udinese.
Xiriirka kubada cagta ee dalka talyaaniga ayaa Rudi Garcia ku helay eedeeymo ah in uu ku gardaroday oo uu u hanjabay tababaraha kooxda Genoa,ka dib markii ay dhamaatay ciyaartii ay axadii kooxda Roma 1-0 uga badisay kooxda Genoa.
Sidoo kale daafaca kooxda Roma Jose Holebas ayaa la ganaaxay hal kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga,ka dib markii lagu helay danbi ah in uu farta dhexe ku fiiqay taageerayaasha oo waxyaabo ku soo tuurayay garsoorayasha iyo ciyaartoyda kooxda Roma.
Ciyaaryahan Diego Perotti oo u ciyaara kooxda Genoa ayaa la ganaaxay sedax kulan,ka dib markii dib loo daawaday ciyaarta,waxana lagu helay danbi ah in uu laaday ciyaaryahan Holebas oo xanuun dartiis dhulka la jiifay.
Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa isna tarabuunka ka daawan doono ciyaarta ay kooxda Juventus khamiista la ciyaareyso kooxda Cagliari.
Macalin Allegri ayaa lagu helay danbi ah in uu caayay garsoorihii dhex dhexaadinayay ciyaartii ay sabtidii kooxda Juventus barbardhac 1-1 ah la gashay kooxda Sampdoria.